Ngatitendei Kunaya Kwemvura — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Ngatitendei Kunaya Kwemvura
Zvinotaura Bhaibheri Nezvokunaya Kwemvura
Zvinofamba Sei Kuti Mvura Izonaya?
Izvi Zvinofanira Kukutuma Kuitei?
MVURA! Taizoita sei kudai isinganayi? Ichokwadi kuti mvura yakawandisa inogona kukonzera mafashamo ane njodzi. Uyewo, vanhu vanogara munzvimbo dzinotonhora, dzinonyanya kunaya, nedzimwewo dzine mwaka yakadaro, hapasi pose pavanofarira kunaya kwemvura. (Ezra 10:9) Asi zvakadini nemamiriyoni evanhu vanofanira kutsungirira kugara munzvimbo dzinopisa dzisinganyanyi kunaya mvura? Mvura painozonaya, inoita kuti vanzwe vafefeterwa!
Ndizvo zvakanga zvakaitawo nzvimbo dzinotaurwa muBhaibheri, dzakadai sedzaiva muAsia Minor, kwaiitira muapostora Pauro basa rake roumishinari. Ari ikoko, Pauro akaudza vanhu vokuRikaoniya vekare kuti: “[Mwari haana] kurega kuzvipupurira pakuti akaita zvakanaka, achikupai mvura inobva kudenga nemwaka inobereka zvibereko, achizadza mwoyo yenyu kwazvo nezvokudya nomufaro.” (Mabasa 14:17) Ona kuti Pauro akatanga ataura nezvemvura inonaya, nokuti kudai isinganayi hapana zvirimwa zvaizokura uye paisazova “nemwaka inobereka zvibereko.”
Bhaibheri rinotaura zvakawanda nezvemvura inonaya. Mashoko echiHebheru neechiGiriki anotaura nezvemvura inonaya anooneka muBhaibheri kanopfuura zana. Ungada kuziva zvakawanda nezvechipo ichi chinoshamisa chemvura inonaya here? Uyewo, ungada kusimbisa kutenda kwako kuti Bhaibheri rakarurama mune zvesayenzi here?
Jesu Kristu akaita kuti tifunge nezvechimwe chinhu chinodiwa kuti mvura inaye. Jesu akati, “Baba venyu vari kumatenga, . . . vanoita kuti zuva ravo ribudire vanhu vakaipa nevakanaka uye vachiita kuti kunaye pavanhu vakarurama nevasina kururama.” (Mateu 5:45) Waona here kuti Jesu akataura nezvezuva asati ataura nezvokunaya kwemvura? Izvozvo zvakakodzera nokuti zuva haringopi simba chete kuzvinhu zvinomera kuti zvikure asiwo rinoita kuti mvura inaye. Chokwadi kupisa kunoita zuva ndiko kunoita kuti mvura yakawanda yomugungwa (400 000 km3) ive mhute inozonaya gore roga roga. Nokuti Jehovha Mwari akasika zuva, ndokusaka achinzi ndiye anoita kuti mvura ikwire kudenga yozonaya.
Bhaibheri rinorondedzera zvinoitika kuti mvura izonaya richiti: “Mwari . . . anokwevera madonhwe emvura kumusoro; anopfuura nepasefa semvura inonaya kuti ave mhute yake, zvokuti makore anodonhedza madonhwe, anodonhera vanhu ari mazhinji kwazvo.” (Jobho 36:26-28) Kubvira pakanyorwa mashoko iwaya akarurama mune zvesayenzi zviuru zvemakore akapfuura, vanhu vakapedza nguva yakawanda kuti vanzwisise zvinoitika kuti mvura inaye. Rimwe bhuku rakabudiswa muna 2003 rinonzi Water Science and Engineering rinoti, “Pari zvino, zvinoitika kuti donhwe rizovapo hazvinyatsozivikanwi.”
Masayendisiti anoziva kuti madonhwe anobva patwunhu twuduku-duku twusingaoneki panozoungana mhute pogadzirwa tumadonhwe twudukuduku mumakore. Twumadonhwe utwu twunofanira kuwedzera kukura nekamiriyoni kana kupfuura kuti twuve madonhwe anozonaya. Zvinoitika apa zvinotora maawa akawanda uye zvakaoma kunzwisisa. Rimwe bhuku rinonzi Hydrology in Practice rinoti: “Kune zvakawanda zvinotaurwa zvinonzi ndizvo zvinoitika kuti madonhwe avepo ozonaya, uye kuongorora zvinotaurwa izvi kunoita kuti vatsvakurudzi varambe vachida kutsvakurudza.”
Musiki wezvinonzi ndizvo zvinoitika kuti mvura izonaya aigona kubvunza mushumiri wake Jobho mibvunzo iyi inoninipisa: “Ko mvura inonaya ina baba here, kana kuti ndiani akabereka madonhwe edova? Ndiani akaisa uchenjeri mumakore akaturikidzana? . . . Ndiani anganyatsoverenga makore nouchenjeri, kana kuti ndiani angadurura zvirongo zvemvura zvokudenga?” (Jobho 38:28, 36, 37) Kunyange zvazvo papfuura makore anenge 3 500, masayendisiti achiri kunetseka kupindura mibvunzo iyi yakaoma.
Mazana emakore pashure pokunge bhuku raJobho ranyorwa, vazivi vechiGiriki vaidzidzisa kuti mvura yomurwizi yakanga isingabvi kumvura inonaya asi kuti yaiva mvura yomugungwa yaiyerera nepasi ichienda pamusoro pemakomo yozova mvura yakachena yomuzvitubu. Rimwe bhuku rinotsanangura Bhaibheri rinotaura kuti Soromoni aibvumirana nepfungwa yacho. Ona mashoko akafuridzirwa aSoromoni, anoti: “Hova dzose dzomuchando dzinoenda kugungwa, asi gungwa harizari. Kunobva hova dzomuchando, ndiko kwadzinodzokerazve.” (Muparidzi 1:7) Soromoni aireva here kuti mvura yomugungwa yaiendeswa nomukati memakomo yozonosvika kunzizi? Kuti tipindure mubvunzo uyu, ngationei kuti vamwe vaiva munzvimbo yaigara Soromoni vaidavirei nezvemafambiro anoita mvura. Vakanga vasingazivi chokwadi here?
Asingasviki makore zana pashure penguva yaSoromoni, muprofita waMwari Eriya akataura maziviro aaiita kunobva mvura. Panguva yaairarama, nyika yavo yakanga yava nemakore matatu isinganayi mvura. (Jakobho 5:17) Jehovha Mwari akaunza dambudziko iri pavanhu vake nokuti vakanga vamuramba vachida kutevera mwari wemvura wevaKenani, Bhaari. Asi Eriya akabatsira vaIsraeri kuti vapfidze, saka akanga ava kuda kunyengetera kuti mvura inaye. Paainyengetera, Eriya akaudza mushandi wake kuti atarire “kurutivi rwokugungwa.” Paakaudzwa ‘nezvegore duku rakaita sechanza chomunhu raikwira richibva mugungwa,’ Eriya akaziva kuti munyengetero wake wakanga wapindurwa. Pasina nguva, “matenga akasviba nemakore, kukava nemhepo nemvura zhinji kwazvo.” (1 Madzimambo 18:43-45) Saka Eriya akaratidza kuti aiziva kuti zvinofamba sei kuti mvura izonaya. Aiziva kuti makore aizoita pamusoro pegungwa ozoendeswa nemhepo pamusoro peNyika Yakapikirwa. Kusvikira iye zvino, ndizvo zvinoitika kuti mvura izonaya panyika.
Anenge makore zana Eriya anyengetera kuti mvura inaye, mumwe murimi ainzi Amosi akasimbisa mashoko anokosha nezvekunobva mvura kuti izonaya. Amosi akashandiswa naMwari kuti aprofite nezvevaIsraeri vaidzvinyirira varombo uye vainamata vanamwari venhema. Kuti vasaparadzwa naMwari, Amosi akavakurudzira kuti “tsvakai Jehovha kuti murambe muchirarama.” Zvadaro, Amosi akatsanangura kuti Jehovha ndiye chete anofanira kunamatwa nokuti ndiye Musiki, “Iye anoshevedza mvura yegungwa, kuti aidururire panyika.” (Amosi 5:6, 8) Amosi akazodzokorora chokwadi chinoshamisa ichi nezvezvinoitika kuti mvura inaye uye kwainobva nako kuti izonaya. (Amosi 9:6) Saka Amosi akaratidza kuti nyanza ndidzo dzine mvura yakawanda inozonaya.
Izvi zvakapupurirwa nomusayendisiti ainzi Edmond Halley muna 1687. Asi zvakatora nguva kuti vamwe vazobvuma uchapupu hwaHalley. Encyclopædia Britannica Online inoti: “Dzidziso yokuti mvura inoyerera nepasi ichibva mugungwa ichienda pamusoro pemakomo yozoenda munzizi, yaidavirwa kusvikira pakutanga kwezana remakore rechi18.” Iye zvino, munhu wose ava kuziva kuti zvinofamba sei kuti mvura izonaya. Bhuku iroro rinotsanangura kuti: “Mvura yomugungwa inoita mhute ichikwira, yoita makore iri mudenga, yonaya paNyika, uye yozoyerera munzizi ichidzokera mugungwa.” Saka zviri pachena kuti izvi ndizvo zvinorehwa nemashoko aSoromoni ari pana Muparidzi 1:7 anotaura nezvezvinoitika kuti mvura inaye.
Sezvo zvinoitika kuti mvura izonaya zvichinyatsotsanangurwa nevanyori veBhaibheri vakasiyana-siyana, zvinoratidza zvakajeka kuti Bhaibheri rakafuridzirwa noMusiki wevanhu, Jehovha Mwari. (2 Timoti 3:16) Kutaura zvazviri, kutadza kuri kuitwa nevanhu kuchengetedza pasi kwave kuchikanganisa mamiriro okunze, zvichikonzera mafashamo akaipa mune dzimwe nzvimbo uye kusanaya kwemvura mune dzimwe. Asi Musiki anoita kuti mvura inaye, Jehovha Mwari, akavimbisa kare kare kuti achapindira ‘oparadza vaya vanoparadza nyika.’—Zvakazarurwa 11:18.
Panguva ino, ungaratidza sei kuti unotenda zvipo zvaMwari zvakadai sokunaya kwemvura? Unogona kudaro nokudzidza Shoko rake, Bhaibheri, uye kushandisa zvaunodzidza muupenyu hwako. Ukadaro uchatarisira kupona uchipinda munyika itsva yaMwari, mauchanakidzwa nezvipo zvaMwari nokusingaperi. Chokwadi, “zvipo zvose zvakanaka nezvinopiwa zvose zvakakwana” zvinobva kuna Jehovha Mwari, ari iye anonayisa mvura.—Jakobho 1:17.
MVURA INOITA MAKORE
MITI INOBUDISAWO MVURA MVURA INOITA MHUTE
Eriya paainyengetera, mushandi wake akatarira “kurutivi rwokugungwa”